Afera Razaimamonjy Claudine Manazava ny Fitantanana ankapoben’ny hetra
Nisy ny fanitsiana sy fanampim-panazavana nalefan’ny Fitantanana Ankapoben’ny Hetra mahakasika ny raharaha Razaimamonjy Claudine.
Tsiahivina fa ny zoma 28 febroary teo no niroso tamin’ny fakàna ny entanan’io mpandraharaha io ny Fanjakana. Natao izany ary natrehan’ny ireo tompon’andraikitra nisolo tena ny Fitantanana Ara-ketra miaraka tamin’ny vadintany sy ny mpitandro ny filaminanana. Araka ny fanazavana dia tsy ny teo anivon’ny Hotely A&C ihany no nakàna ny entana, tahaka ny malaza ao amin’ny tambajotra sosialy, fa voakasika amin’izany ihany koa ireo fananana manontolo mihitsy (patrimoine). Araka ny fampitam-baovao ihany koa dia natao tamin’ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny zo maha-olona ny zavatra notanterahana rehetra. Tahaka izany ihany koa dia nisy ny fakàna ny entan’i Mbola Rajaonah teny Ambohimangakely ny sabotsy 29 Febroary lasa teo. Fampiharana ny lalàna velona sy manankery izany rehetra izany ary heloka ara-ketra (frauds fiscales) no antony nirosoana tamin’izany hoy ny tatitry ny fanambarana. Ankoatr’izay dia angom-baovao azo avy amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (BIANCO) sy ny Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin’ny famotsiam-bola sy famatsiam-bolan’ny fampihorohoroana (SAMIFIN) no nanatanterahana ny asa. Mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika izany ary andrasana ny ho tohin’ny raharaha.